Tag: fifaninanana sary | Martech Zone
Tag: fifaninanana sary
Nanoratra momba ny ShortStack izahay taloha ary androany dia nandefa fanamarihana mahafinaritra miaraka amin'ny infographic manampy izy ireo. Azonao atao ve ny maminavina ny fomba tsara indrindra handrisihana ireo mpampiasa handrisika hirotsaka amin'ny marika na orinasa? Azonao izany: fifaninanana! Izany no hitan'i ShortStack rehefa nanao fanadihadiana tamin'ny mpampiasa 800 mahery izy ireo. (PS: Izay ny rohy ifandraisanay) Tsy nahagaga anay izany vokatra izany - satria hitantsika isan'andro ny fomba hampitomboan'ny fifaninanana ny Likes